प्रथम ऐतिहासिक विश्व शेर्पा सम्मेलन शेर्पा समुदायलाई मार्गनिर्देशन – Everest Times News
२०७४ भाद्र २७, मंगलवार ०८:४७
विश्व सम्मेलन गर्ने कुराको शुरुवात कहिलेदेखिन भएको हो ।
सम्मेलन तयारी समिति अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । सम्मेलन नेपालमा हुने भएको हुदा सम्पुर्ण व्यवस्थापन शेर्पा संघले संयोजनको भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने आर्थिक संयोजकको रुपमा शेर्पा किदुग अमेरिकाका निवर्तमान अध्यक्ष दावा जाङबु शेर्पालाई आर्थिक संयोजक र वेल्जिय किदुगको अध्यक्ष आङ दोर्जी शेर्पा सोनामलाई सहसंयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ भने सम्मेलनको सदस्य सचिवमा शेर्पा किदुग अमेरिकाको नेतृत्व परिवर्तनसंगै किदुगको प्रबक्ता पेम्बा गेलु शेर्पालाई जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रचारप्रसार समिति तथा मिडिया कोर्डिनेटरको रुपमा आङछिरिङ शेर्पालाई संयोजक र युरोप शेर्पा संघको महासचिव पेम्बा गेलु शेर्पालाई सहकोर्डिनेटरको रुपमा राखेर तयारी गरिरहेको छ । सम्मेलनकै लागि स्मारिका प्रकाशन गर्न लागेकोले सम्बन्धीत सवैमा लेख रचना र विज्ञापनको लागी अनुरोध गरि सकेका छौ । यसको लागी सवैको सहयोगको अपेक्षा पनि गरिरहेका छौ ।
अहिलेसम्म विश्वमा शेर्पा किदुग भनेर गठन भएको २४-२५ वटा भएपनि अझै पनि कतिपय मुलुकहरुमा गठनको प्रक्रियामा रहेको छ । यो सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न १५ देखि २० राष्ट्रमा रहेका शेर्पा किदुग तथा संघ सस्थाहरुको प्रतिनिधिहरु उपस्थिति हुने भएको छ । त्यस्तै नेपाल शेर्पा संघको सल्लाहकार लगायत कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, जिल्ला शेर्पा संघका प्रतिनिधिहरु2जना (हरेक जिल्लाबाट), त्यस्तै काठमाडौमा रहेका शेर्पा संघको भातृ संघ सस्थाहरुबाट ५ जना (हरेक संघ सस्थाहरुबाट), काठमाडौमा रहेका विभिन्न जिल्ला तथा गाउको किदुगहरुबाट ३ जना (हरेक किदुगहरुबाट) , धर्म गुरुहरु, सञ्चारकर्मिहरु कलाकारहरु र अन्य बिशेष बुद्धिजीविहरु, ब्यब्शायीहरु लगाएत २५० देखि ३०० सम्मको हाराहारीमा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति हुने भएको छ ।
दुई दिने सम्मेलनको कसरी हुदैछ ?
पहिलो दिनको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रिबाट सम्मेलनको उदघाटन गरिने भएको छ भने त्यही दिन बेलुकी सास्कृतिक कार्यक्रम सहित रात्रीभोज हुने छ । त्यसको भोलिपल्ट दोश्रो दिन शेर्पा गुम्बा (शेर्पा सेवा केन्द्र) को हलमा विभिन्न विषयहरुमा सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरि कार्यशाला गोष्ठि गरिने छ । विशेषत यो दोश्रो दिनको सम्मेलनले हाम्रो समाजमा धर्म सस्कृति र परम्परामा देखिदै आएको विकृति र विसंगतिहरुलाई कसरी निरुत्साहीत गर्ने, देशविदेशमा लगानीको अवसर कसरी सृजना गर्ने र मातृभुमी नेपालमा शेर्पा लगायत अन्य समुदायलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि व्यापाक छलफल गरिने छ । समग्रमा देश विदेशमा शेर्पा समुदायले आफनो भाषा, धर्म सस्कृतिको संरक्षणमा कसरी टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा ब्यापक छलफल गरि सम्मेलनको अन्तमा घोषणा पत्र जारी गरिने छ । त्यस्तै तदर्थ समितिले तयार पारेको मस्यौदा विधानलाई छलफल गरि आवश्याक परिमार्जन सहित पारित गरि विश्व शेर्पा संघ शेर्पा गठन गरिने छ ।
तपाईको नेतृत्वमा खरिद गरेको नेपाल शेर्पा शेर्पा संघको भवनको बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ की ?
यो भवनको लागी रकम कसरी संकलन गदै हुनुहुन्छ र कहिलेसम्म संघको नाममा स्वमित्वमा लिने योजना हो ?